Xukuumadda Rooble oo war kasoo saartay qaraxii Banadir - Caasimada Online
Home Warar Xukuumadda Rooble oo war kasoo saartay qaraxii Banadir
Muqdisho (Caasimada Online) – Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimuu ayaa goordhoweyd ka hadlay qarax barqanimadii maanta ka dhacay agagaarka Isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho, kaas oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa lala beegsaday gaari uu la socday Janeraal Maxamed Xaashi Guuleed oo ka tirsan ciidamada Milatariga Soomaaliya, kaasi oo uu dhaawac kasoo gaaray qaraxa.
Afhayeenka Xukuumadda ayaa caafimaad deg deg ah u rajeeyay Jeneral Maxamed Xaashi oo qaraxa ku dhaawacmay, sidoo kalena uu u tacsiyadeeyay laba amid ah ilaaladiisa oo qaraxa ku dhaawacmay.
Macallimuu ayaa kusoo safeeyay Jeneraalka in uu kamid yahay saraakiisha waayo-aragga ah ee laf-dhabarta u ah Ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed, islamarkaana kaalin mug leh ka qaatay dib u dhiska ciidanka Milatariga Soomaaliya.
Hoos ka aqriso qoraalka Macallimuu oo dhameystiran.
General Maxamed Xaashi waxa uu ka mid yahay saraakiisha waayo-aragga ah ee lafdhabarta u ah u ah Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed , xurmad weyna ku dhex leh kaas oo kaalin mug leh ka qaatay dib u dhiska ciidanka Militiriga Soomaaliya.